Uncedo lweBrand: Urhulumente weBranding | Martech Zone
Uncedo lweBrand: Urhulumente weBranding
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 29, 2006 NgoMvulo, Meyi 18, 2015 Douglas Karr
Ndenzekile enkulu isikhundla ngale ngokuhlwa malunga neLizwe lokuPhawula. Andiphikisani kwaphela nombhali, uBrad VanAuken, kodwa bendifuna ukongeza amanqaku. Sele kuyiminyaka embalwa ndisebenza ngokusesikweni kunye nabaphathi beempawu zecala, kodwa ndifuna ukwenza indawo ephambili enokuthi icace kodwa iimfuno zichaziwe.
Ngelixa kushishino lwamaphephandaba kule minyaka ilishumi idlulileyo, ndabona ukwehla okukhulayo kokulawula okanye ukuphatha uphawu. Ngokwenkangeleko, kwakusekulula… imibala, iilogo, kunye nemveliso ayitshintshanga. Nangona kunjalo, uhlobo uyenzile. Uhlobo lutshintshile ukusuka ngaphandle ngaphakathi.
Umyalezo wethu kunye nombono wethu bezihambelana. Nangona kunjalo, medium apho abantu bafumana i uhlobo ibitshintsha isuka kuthi iye ebantwini, nge-Intanethi, ngabantu esihambisa nabo, ngabantu bethu beenkonzo zabathengi, ngabathengi bethu, kukhuphiswano lwethu lwe-Intanethi, njl.
Kwakuyishishini njengesiqhelo. Sonke siwangawangisile sincumelene kwaye salatha ngeminwe yethu njengoko aba babhali bethetha kwaye besenza izinto ezisitshabalalisayo, kwaye asenzanga nto. Ngenxa yoko, uphawu lwaqala ukusilela- kwaye basahluleka nangoku. Ndayibona, ndakhwaza, kwaye ndaboniswa ukuphuma (ngombulelo).
Ngamanye amaxesha ayikhawulezi kwamanye amashishini, kodwa silubona olu tshintsho kuyo yonke indawo. Umcimbi kukuba ngaba abaphathi be brand yakho benza okuthile ngayo okanye akunjalo. Ngaba abaphathi bakho bebhrendi banxibelelana njani ngempumelelo nomyalezo wokuba inkampani yakho izama ukuhambisa abathengi bayo ngezi ndlela zintsha? Ngaba bonke abasebenzi bakho ngoku bayaqonda ukuba balawula uphawu? Ngaba banoxanduva lwayo? Baqeqeshwa njani ukujongana noku? Zithini iibhlog zabo malunga nebrand yakho?
Ngoku kungaphezulu komphathi webhrend yakho ngumgangatho wenkampani uqobo. Ndiyakholelwa ukuba uMnu VanAuken wenza umsebenzi omkhulu wokuchaza oku. Ukuphakamisa umba kukhetho. Abathengi bavezwa kukhetho olutsha ngokukhawuleza xa besiva iindaba ezimbi malunga negama lakho. Kwimeko kwinqanaba, ngobunye ubusuku mna thunyelwe malunga Swapagift.com. Emva kokuthumela, ndiye ndafumana iqonga ebelithetha ngenkonzo kwaye ndafumana enye inkonzo ebhekiswe ngendlela engcono… CardAvenue. Kwimizuzu embalwa ndifumene imveliso elungileyo (HAYI ngentengiso yayo) kwaye ndafumana omnye umboneleli wale mveliso inye (HAYI ngentengiso yabo)!
Kuyamangalisa ukuba ngokukhawuleza iindaba ezimbi ziya kuhamba kwaye ukhuphiswano luya kuvela. Ngaphezulu kunakuqala, umphathi wakho weBrand kufuneka enze iinzame ezininzi zokunxibelelana ngaphakathi njengoko esenza ngaphandle. Kufuneka babe ngumvangeli kunye nomqeqeshi wabo bonke abasebenzi bakho. Inkonzo yakho, imveliso yakho, kwaye uninzi lwazo zonke, abantu bakho ngabona bantu bakho babalaseleyo ekunxibelelaneni negama lakho. Baqhuba njani?
tags: uhloboIsicwangciso sokuthengisaimeko yophawu
IMicrosoft: Nceda undongeze kuLuhlu lwakho lweePosi zeFerrari
Enkosi, uDorion Carroll kunye neTechnorati!
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2006 ngo-11: 35 AM
Ndiziva ndinethamsanqa kakhulu, njengosomashishini osaqalayo, ukuba ndifunde malunga nenethiwekhi yoluntu kunye nokuzenzela uphawu kwasekuqaleni. Kwinqaku olichazileyo, umbhali ugxininise ezi ngongoma: "ulwazi, ukufikeleleka, ixabiso, ulwahlulo olufanelekileyo kunye nonxibelelwano lweemvakalelo." Ndisebenzela ukubetha la manqaku njengoko ndikhula. Ujoliso lwam ngoku kukunika ixabiso simahla, ukwakha intembeko. Kwaye, andixakwanga bubureucracy. BTW, ndenza kakuhle!
Vince, iprop yodwa., Umthengisi we-eBay, indlela-yombhali.